रोनाल्डो र मेस्सीको दबदबा एमबाप्पे र हल्यान्डमा सरेको हो?
नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन ६, २०७७, १४:३०
काठमाडौं- पछिल्लो पुस्ताका खेलाडीमा नर्वेका एरलिङ ब्रउट हल्यान्डले फुटबल समर्थकलाई चकित पारिरहेका छन्। फ्रान्सका विश्वकप विजेता खेलाडी केलियन एमबाप्पेको चमक देखिएको त लामै समय भइसक्यो। यिनै दुईले यो हप्ता युइएफए च्याम्पियन्स लिग खेलमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सीलाई छायामा पारिदिए।
च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को पहिलो लेग खेलमा फ्रेन्च क्लब पिएसजीबाट एमबाप्पेले मेस्सीको कप्तानीमा रहेको स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाविरुद्ध ह्याट्रिक गरे। पेनाल्टीमार्फत मेस्सीले गरेको एक गोल महत्वविहीन देखियो। हल्यान्डले जर्मन क्लब बोरुसिया डोर्टमुन्डबाट स्पेनिस क्लब सेभियाविरुद्ध दुई गोल गरे। जहाँ क्रिष्टियानो रोनाल्डो सम्मिलित इटालियन क्लब युभेन्टस पोर्चुगिज क्लब पोर्टोसँग २–१ ले पराजित भयो। रोनाल्डो गोलविहीन रहे।
इंग्ल्यान्ड, स्पेन हुँदै अहिले इटालीमा आफ्नो क्षमता देखाइरहेका रोनाल्डो ३६ वर्षका भए। बार्सिलोनाबाट गएको सिजन नै बाहिरिन चाहेका मेस्सी ३३ वर्षका भए। यी दुईले एक दशकभन्दा लामो समय विश्व फुटबलको केन्द्रमा राज गरे। गएका केही वर्ष यता यी दुवैको टिम विश्व फुटबलमा विशेष मानिने च्याम्पियन्स लिगमा राम्रो देखिन सकिरहेको छैन।
‘जब मैले एमबाप्पेले ह्याट्रिक गरेको देखेँ, सित्तैमा मनोबल बढाउने अवसर पाएको जस्तो भयो, त्यसैले उनलाई धन्यबाद’ सेभियाविरुद्धको खेलपछि हल्यान्डले भनेका छन्। एकअर्काबाट यस्तै प्रेरणा र प्रतिस्पर्धा लामो समयदेखि रोनाल्डो र मेस्सीले महसुस गर्दै आइरहकै छन्।
मन पराउने हुन् या घृणा गर्ने रोनाल्डो र मेस्सीको फुटबल कलाले सबैलाई अचम्मित पारिरहेकै हो। यसैले त विश्व फुटबलमा व्यक्तिगत रुपमा पाइने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवार्ड मानिने बालोन डि’ओर गएको १२ वर्षमा ११ पटक विश्व उत्कृष्ट हुँदै रोनाल्डो र मेस्सीले नै जितेका छन्। जुन रोनाल्डोले पाँच र मेस्सीले छ पटक जितेका छन्।
रोनाल्डोले स्पोर्टिङ लिस्बोन, म्यानचेस्टर युनाइटेड, रियल मड्रिड, युभेन्टस र पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिमबाट गरेर समग्रमा गरेको ७६३ गोल विश्व फुटबलमा सर्वाधिक गोलको संख्या हो। पाँच पटक च्याम्पियन्स लिग जितेका रोनाल्डो त्यसको इतिहासमा सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन्। जहाँ उनले १२८ गोल गरेका छन्। रियल मड्रिडका सर्वाधिक गोलकर्ता पनि उनै हुन्। जहाँ उनले ४५० गोल गरेका छन्।
बार्सिलोनाबाट ६५४ गोल गरेका मेस्सी क्लबका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। जहाँ उनले विभिन्न ३४ उपाधि जितेका छन्। ला लिगामा मेस्सीले गरेको ४५९ गोल प्रतियोगिताको सर्वाधिक हो। गएको सिजन बार्सिलोनामा खराब समय देखिँदा पनि मेस्सीले ३१ गोल र २६ गोलमा असिस्ट गरेका थिए। २०१२ मा मेस्सीले बार्सिलोनाबाट ७९ र अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टिमबाट १२ गरेर ९१ गोल एक वर्षको समयमा सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान हो।
यीबाहेक पनि रोनाल्डो र मेस्सीको नाममा रहेका कीर्तिमानको सूचि निकै लामो छ। यिनको फुटबल कलामा दशक बिताएका हरकोही फुटबल समर्थकलाई त्यसको आँकडा थाहा नै छ। अहिलेसम्म पनि विश्व फुटबलमा कसैबीच प्रतिस्पर्धात्मक तुलना गरिन्छ भने त्यो रोनाल्डो र मेस्सी नै हो। अब भने विस्तारै फुटबल समर्थक नयाँ अनुहारको खोजीमा देखिन्छन्। मेस्सी र रोनाल्डोको दशक लामो दबदबा तोडिने गरी नयाँ खेलाडी देखिन थालेका पनि छन्। त्यसैमा अघि रहेका दुई नाम हो, एमबाप्पे र हल्यान्ड।
एमबाप्पेलाई विश्व फुटबलमा प्रमुख खेलाडीका रुपमा हेरिएको केही वर्ष भइसक्यो। २०१८ को विश्वकप जितेयता त उनी केन्द्रमा नै छन्। मोनाकोबाट पिएसजीले १६६ मिलियन पाउण्डमा ल्याउँदैदेखि उनी चर्चामा छन्। २२ वर्षका उनी अहिले पिएसजीमा सर्वाधिक गोलको सूचिमा तेस्रो स्थानमा पुगिसकेका छन्। पिएसजीका लागि उनको १११ गोल इडिसन काभानी र जाल्टन इब्राहिमोभिच भन्दा पछि छ। काभानीको २०० र इब्राहिमोभिचको १५६ गोल छ।
एमबाप्पेभन्दा छिटो र अचम्मसँग उदाएका खेलाडी हुन् हल्यान्ड। २० वर्षका हल्यान्ड एक वर्षअघिसम्म उनको देश नर्वेभन्दा बाहिर सायदै चिनिन्थे। तर च्याम्पियन्स लिगमा देखाएको सनसनी खेलसँगै उनको परिचय व्यापक हुँदै गयो। उनले बोरुसिया डोर्टमुन्ड र अस्ट्रियन क्लब साल्जबर्गबाट च्याम्पियन्स लिगका १३ खेलमा नै १८ गोल गरिसकेका छन्।
यसैले पूर्वफुटबल खेलाडी ग्यारी लिनेकरले भनेका छन्, ‘यसको मतलब हामीले अब रोनाल्डो र मेस्सीको समयपछि हेर्नलायक खेलाडी पाएका छौँ। अहिले एमबाप्पे र हल्यान्डको गोलसंख्या रोनाल्डो र मेस्सी उचाइमा रहँदाको समय जस्तो छ।’
पूर्वखेलाडी रियो फर्डिनान्डलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले लेखेको छ, ‘यसअघि मबाप्पेले मेस्सीलाई छायामा पारे, अहिले रोनाल्डो छायामा पर्ने गरी हल्यान्ड देखिए। यो विश्व फुटबलमा अर्को पुस्ताको उदय हो। यी विश्व फुटबलका अर्का प्रतिस्पर्धी हुन सक्नेछन्। हामीले कहिलेदेखि सोधिरहेका थियौँ कि अब अगाडि को?’
अर्का पूर्वखेलाडी जोय कोल भन्छन्, ‘जब रोनाल्डो र मेस्सीले आफ्नो उचाइ लिँदै थिए त्यसबेला पनि गोलको यस्तो संख्या हामीले देखेका थिएनौँ। अब आउने दिनमा यिनीहरुले अझ राम्रो खेल देखाउने नै छन्।’
हुन पनि २१ वर्षको उमेरभन्दा अघिको समयमा च्याम्पियन्स लिग गोल संख्यालाई हेर्ने हो भने एमबाप्पे र हल्यान्ड नै अघि देखिन्छन्। जहाँ एमबाप्पेले २१ वर्षको हुनुअघि १९ गोल गरेका थिए। २० वर्षका हल्यान्डको १८ गोल भइसकेको छ। मेस्सीले ८ गोल गरेका थिए भने रोनाल्डो गोलविहीन थिए।
सन् २०१९–२० को सिजनयताको समयमा घरेलु लिग र च्याम्पियन्स लिगलाई हेर्ने हो भने रोनाल्डो, मेस्सी, एमबाप्पे र हल्यान्डको तथ्यांक प्रतिस्पर्धामा नै देखिन्छ। त्यसयता रोनाल्डोले ६४ खेलमा ५५ गोल र ९ असिस्ट गरेका छन्। मेस्सीको ६६ खेलमा ४७ गोल र २९ असिस्ट छ। एमबाप्पेले ५७ खेलमा ४४ गोल र १९ असिस्ट गरेका छन्। हल्यान्डले ५८ खेलमा ६२ गोल र ७ असिस्ट गरेका छन्।
त्यसमा च्याम्पियन्स लिगलाई मात्र हेर्ने हो भने रोनाल्डो र मेस्सीको समयलाई एमबाप्पे र हल्यान्डले मैदानबाट बिदा गरिरहेको भान हुन्छ। २०१९–२० को सिजन यता रोनाल्डो र मेस्सीको गोल जोड्दा १५ देखिन्छ भने एमबाप्पे र हल्यान्डले गरेको गोल जोड्दा २८ रहेको छ।
हल्यान्डले च्याम्पियन्स लिगका १३ खेलमा १८ गोल मात्र होइन बुन्डेस लिगाका ३१ खेलमा २८ गोलसमेत गरिसकेका छन्। यो सिजन समग्र २४ खेलमा उनले २५ गोल गरिसकेका छन्। एमबाप्पेले च्याम्पियन्स लिगका ४१ खेलमा २४ गोल गरिसकेका छन्। फ्रेन्च लिग वानमा ९८ खेलमा ८० गोल गरेका छन्। यो सिजनको तथ्यांक हेर्दा उनले २९ खेलमा २१ गोल गरिसकेका छन्।
च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ मा दुई दिनको खेलपछि सामाजिक सञ्जालमा अहिले फुटबल समर्थकमाझ उत्कृष्ट खेलाडी को? भन्ने बहस चलिरहेको देखिन्छ। त्यसमा एमबाप्पे र हल्यान्डको दुई खेलको गोलका आधारमा मात्र होइन उनीहरुको समग्र भूमिकालाई हेर्दा अगाडि बढ्ने खेलाडी हुन् भन्ने त प्रस्ट छ। तर यी दुईले रोनाल्डो र मेस्सीको उचाइ बिर्साउने गरी केही गर्न सक्लान्?
(यो सामग्री बिबिसी, मार्का र गोलमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो।)